Boqolaal Askari Oo Lagu Dilay Weerar Ka Dhacay Koonfurta Wadanka Afghanistan.
Wednesday August 02, 2017 - 10:32:52 in Wararka by Super Admin
Boqolaal Katirsan Ciidamada Xukuumadda Afghanistan ayaa lagu dilay weeraro culus oo Dagaalyahanada Xarakada Taliban Ay Ka Fuliyeen Koonfurta wadankaasi.
Wadanka Afghanistan waxaa sii xoogeystay guluf dagaaleedka ay imaaratada Islaamiga ah ugu jirto qabsashada magaalooyin hor leh oo ay ku suganyihiin maleeshiyaadka xukuumadda Camiilka Kaabuul ee wadashaqeynta laleh Mareykanka iyo isbahaysiga NATO.
Wariyaal ayaa soo sheegay in dagaalyahanada Taliban ay albaabada utaaganyihiin dhowr magaalo oo dhaca Koonfurta iyo Bartamaha wadanka Afghanistan waxaana kamid ah magaalada 2-aad ee ugu weyn gobolka istiraatiijiga Helmand.
Wararka ka imaanaya Afghanistan waxay sheegayaan in Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobalka Helmand.
Dagaalka waxa uu yimid kadib markii ciidamada Mujaahidiintu weerar culus ay ku qaadeen saldhig iyo fariisimo maleeshiyaatka daba dhilifka Afghanistan ay ka sameysteen deegaano dhaca duleedka magaaalada Nawah oo ka tirsan gobalka Helmand.
Warbaahinta maxaliga Afghanistan waxey baahiyeen in dagaalkaasi lagu dilay ku dhawaad (200) Labo Boqol oo isugu jirta askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka Ashraf Gani oo ah madaxweynaha maamulka maqaar saarka ah ee kajira magaalada Kaabuul.
Dagaalkan ayaa qeyb ka ah Xamlo dagaaleedka Al-mansuuriyah ee ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ay ka wadaan degmooyinka iyo deegaanada dalka Afghanistan.
Dagaalyahanadda Taliban ayaa la sheegay in dagaallo culus ay ka wadaan degmooyin katirsan gobolka Goor,Faariyaab iyo Qandahaar waxayna qarka usaaranyihiin in ay la wareegaan degmooyin iyo deegaanno.
Maleeshiyaadka xukuumadda Kaabul ayaa la sheegay in ay isaga firxanayaan goobta dagaalka inkastoo taageero dhanka cirka ah ay ka helayaan diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Mareykanku uu hoggaminayo.
Dhinaca kale Taliban ayaa ku dhawaaqday in diyaarad dagaal ay melleteriga Mareykanka ugasoo ridday gobolka Nangahaar ee wadanka Afghanistan balse illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin taliska NATO oo ku aaddan diyaaradda lagasoo riday.